२५ चैत्र, काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डब्लुएचओ प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्ने उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनप्रति कडा आक्रोश देखाएका हुन् ।
अप्रिल ७ को अमेरिकी समय बिहानै पख उनले ट्विट गर्दै भनेका छन् ‘डब्लुएचओले आश्चर्यका काम गर्दैछ, जुन संस्थालाई अमेरिकाले ठूलो लगानी गरेको छ, उसैलाई बास्ता नगर्ने र चीन केन्द्रीत हुने ? यति गर्दा पनि अमेरिकालाई कुनै आपत छैन । भाग्यबस् मैले उनीहरुद्वारा चीनको सीमा खुला राख्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेछु । त्यस्तो गलत र वाहियात सल्लाह पनि हामीलाई दिने ?’
कोरोना महामारीको ठूलो प्रभावले अमेरिकलाई असहज बनाउँदै गएको बेला अमेरिकी राष्ट्रपतिले चीनसँग ‘मीत्र–शत्रु’ सम्बन्ध कायमै गरेका छन् । यद्दपी यो टिव्टमा चीनसँगको सीधा सत्रुता पोखिएको छैन । डब्लुएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोमलाई चिनीया गुलामी गरेको आरोप अमेरिकाबाट लगाइँदै आएको छ ।